सरकार ढाल्न अर्बौ रकम बोकेर आएका भारतिय एजेण्टसँग प्रचण्ड र माधब पक्षको उठबस ! [भिडियोसहित] – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/सरकार ढाल्न अर्बौ रकम बोकेर आएका भारतिय एजेण्टसँग प्रचण्ड र माधब पक्षको उठबस ! [भिडियोसहित]
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि आफ्नो सरकार ढाल्न भारतले चलखेल गरेको खुलासा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि नेकपामा खैलाबैला भएको थियो । प्रधानमन्त्री यो त्यतिकै हचुवाको भरमा दिएको अभिव्यक्ति हैन रहेछ । किनकी अहिले नेपालको गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छ । त्यहाँ दैनिक जसो सुचना आइनै रहेको हुन्छ । अति संवेदनशील र गोप्य सूचनाहरुपनि उहाँलाई सिँधै आइरहेका हुन्छन् । यसैले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति पछाडीको सत्यता खोज्न हामीले अत्यन्तै नजिकबाट यसको अनुशन्धान गर्न सुरु गर्यौँ ।
यति मात्र हैन भारतका मिडियामा जे समाचार प्रस्तुत हुन्छ त्यसको केही समयपछि प्रचण्डलेपनि त्यही बोलिरहेका हुन्छन् । उनै नेपाल जानकार बरिष्ठ पत्रकारले हामीसँगको सम्वादमा भन्नुभयो तपाई को देशको एउटा कुरामा म समेत चकित छु । आजतक वा दुरदर्शन टेलिभिजनले जे विश्लेषण गरेर समाचार बनाउँछ प्रचण्ड र माधब नेपाल समुहले त्यही गरिरहेको हुन्छ । असार १४ गते आजतकले नेपालमा ओली सरकार संकटमा, यसरी अल्पमतमा पर्दैछन् । प्रचण्ड र माधब नेपाल समुहले यो–यो गर्दैछन् भनेर समाचार प्रचारण गरेको थियो । त्यसको ठिक भोलीपल्टदेखि नै नेपालमा त्यही खेल देखियो । यसैले यहाँ मपनि चकित छु । उहाँले भन्नुभयो ।जनबोली बाट
को*रोनाकै कारण सकियो विरगञ्जको एक ब्यापारीक घराना ! आमा र भाई गुमाए लगत्तै ममताको पनि नि*ध*न